Nepali Christian Bible Study Resources - ख्रीष्टको शरीरमा आत्मिक वरदानहरू
» अध्ययन मालाहरू » पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य » १२ ख्रीष्टको शरीरमा आत्मिक वरदानहरू
ख्रीष्टको शरीरमा आत्मिक वरदानहरू
पाठ १२—ख्रीष्टको शरीरमा आत्मिक वरदानहरू
मानव शरीरलाई महान् सृष्टिकर्ता परमेश्वरले आश्चर्यपूर्ण रीतिले रचना गर्नुभएको छ। आफ्नो शरीरको बारेमा सोचेर दाऊदले यसो भने, “म तपाईंको ___________ गर्नेछु; किनभने म भययोग्य र आश्चर्यपूर्ण रीतिले _________________ छु; तपाईंका कामहरू अद्भुत छन्” (भजनसङ्ग्रह १३९:१४)। तपाईंको शरीर अरबौं र खरबौं स-साना कोषहरू मिलेर बनेको अति सुन्दर जीवित संरचना हो। यस संसारमै भएका मानिसहरूभन्दा पनि तपाईंको शरीरमा भएका कोषहरू नै झन् धेरै छन्! [मानव शरीरमा ठ्याक्कै कतिओटा कोषहरू छन् भनी कसैले पनि जान्दैन, तर वैज्ञानिकहरूले यसको सङ्ख्या करिब-करिब १० देखि १०० करोड खरब (अथवा १० देखि १०० ट्रिलियन) कोषहरू रहेको अनुमान गरेका छन्।] शरीरका विषयमा केही रोचक तथ्यहरू यी हुन्:
१) परमेश्वरले एकै ठाउँमा जोड्नुभएको अर्को शरीर पनि छ।
मानव शरीर आश्चर्यपूर्ण छ, तर परमेश्वरले सुन्दर प्रकारले जोड्नुभएको अर्को शरीर पनि छ। यसलाई ख्रीष्टको शरीर भनिन्छ!
एफेसी १:२२-२३—“र सबै कुराहरू उहाँका (ख्रीष्टका) पाउहरूमनि पारिदिनुभयो, र उहाँ (ख्रीष्ट) लाई सबै कुराहरूमाथि _________ हुनाका निम्ति _____________ (विश्वासीहरू) लाई दिनुभयो, जोचाहिँ ________ ___________ हो।” मण्डली (विश्वासीहरू मिलेर बनेको) उहाँको शरीर हो भनी यस पदले सिकाउँछ! मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो! यस शरीरको शिर को हुनुहुन्छ (एफेसी १:२२)? ______________________
यही सत्यता हामी कलस्सी १:१८ मा पनि सिक्दछौं—“अनि उहाँ (ख्रीष्ट) शरीर अर्थात् _____________ ________ हुनुहुन्छ।” मण्डलीलाई ख्रीष्टको शरीर भनिएको छ। शिर को हुनुहुन्छ (कलस्सी १:१८)? _______________________________
जसरी मानव शरीरमा अङ्गहरू (खुट्टा, हातहरू, मुटु, फोक्सो, कलेजो इत्यादि) हुन्छन्, त्यसैगरी ख्रीष्टको शरीरको पनि अङ्गहरू छन्। यी अङ्गहरू को हुन् भनी हेरौं। १ कोरिन्थी १२:२७ लाई बिचार गर्नुहोस्—“अब ___________ (विश्वासीहरू) ___________को ____________ हौ, र एक-एक गरी चाहिँ अङ्गहरू हौ।” हरेक विश्वासी (मुक्ति पाएको हरेक मानिस) ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग हो। येशू ख्रीष्ट शिर हुनुहुन्छ र हामीहरू अङ्गहरू हौं!
२) शिर एउटै छ तर अङ्गहरू धेरै छन्
१ कोरिन्थी १२:१२ पढ्नुहोस्। तपाईंले “एउटा” वा “एउटै” शब्द कति पटक पढ्नुभयो? ___________। तपाईंले “धेरै” शब्द कति पटक पढ्नुभयो? ___________। शरीर भन्दा अगाडि कुन शब्द आउँछ (एउटा कि धेरै)? ___________ अङ्गहरू भन्दा अगाडि कुन शब्द आउँछ (एउटा कि धेरै)?___________
मानव शरीरका धेरै अङ्गहरू हुन्छन्: आँखाहरू, नाक, पेट, जिब्रो र कानहरू इत्यादि। अन्य अङ्गहरू के-के हुन्? हरेक मानिसमा शारीरिक अङ्गहरू धेरै हुन्छन् तर शरीरचाहिँ एउटै हुन्छ। तपाईंको शरीर कतिओटा छ? _____________
“किनकि शरीर पनि ________ __________ होइन, तर _________ अङ्गहरू हुन्” (१ कोरिन्थी १२:१४)। सम्पूर्ण शरीर अरू केही नभएर एउटा सिङ्गो आँखा भएको भए के हुनेथियो (१ कोरिन्थी १२:१७)? यो शरीरले एकदम राम्रोसँग देख्न सक्ला, तर के यसले राम्रोसँग सुन्न सक्छ? ___________ के यो राम्रोसँग हिँड्न वा दगुर्न सक्छ? ____________ के यसले खान वा चाख्न सक्छ? ____________ के यसले अरूसँग हात मिलाउन सक्छ? ____________ यसले अन्य के-के कुराहरू गर्न सक्दैन?
यदि शरीर केवल एउटै मात्र अङ्गले बनेको भए, हामी समस्यामा पर्नेथियौं!
शरीर ठीक तरिकामा सञ्चालित हुन र कार्य गर्न, यसमा धेरै अङ्गहरू हुनु आवश्यक छ। ख्रीष्टको शरीरको सम्बन्धमा पनि यही कुरा साँचो हो। मण्डली हुनको निम्ति एकजना मात्र भन्दा धेरै विश्वासीहरूको आवश्यकता पर्छ। जसरी शरीर धेरै अङ्गहरू मिलेर बनेको हुन्छ, उसरी नै मण्डली धेरै विश्वासीहरू मिलेर बनेको हुन्छ। तपाईंले मुक्ति पाउनुभएको छ भने तपाईं यी अङ्गहरू मध्ये एउटा हुनुहुन्छ। तर तपाईं एउटै मात्र अङ्ग चाहिँ हुनुहुन्न। ख्रीष्टको शरीरमा त्यहाँ धेरै अरू विश्वासीहरू छन्।
३) कसरी एउटा मानिस ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग बन्दछ?
म कसरी ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग भएँ? मैले येशू ख्रीष्टलाई मेरो व्यक्तिगत मुक्तिदाराको रूपमा ग्रहण गरेर उहँमाथि विश्वास गरेकै घडी यो घटना घटेको थियो। तर यो कसरी घट्यो? यसको जवाफ १ कोरिन्थी १२:१३ मा पाइन्छ—“हामी सबै एउटै ___________ _________ शरीरभित्र ___________ भयौं।”
“बप्तिस्मा” शब्दको अर्थ हो, “चोपल्नु, कुनै वस्तुलाई कुनै वस्तुभित्र राख्नु।” जब एउटा मानिसलाई पानीमा बप्तिस्मा दिइन्छ, उसलाई पानीभित्र चोपलिन्छ। उसलाई पानीभित्र राखिन्छ। यदि तपाईंले कागजको एउटा टुक्रालाई तपाईंको बाइबलभित्र राख्नुभयो र बाइबललाई बन्द गर्नुभयो भने, उक्त कागजलाई तपाईंको बाइबलभित्र “बप्तिस्मा” दिनुभयो भनी तपाईंले भन्न सक्नुहुन्छ। १ कोरिन्थी १२:१३ मा परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई ख्रीष्टको शरीरभित्र बप्तिस्मा गराउनुभएको छ वा राख्नुभएको छ भनी हामी सिक्छौं। उक्त कार्य एउटा मानिसले मुक्ति पाएको घडीमा गरिन्छ। यसलाई निम्न चित्रमा चित्राङ्कन गरिएको छ:
तपाईंले मुक्ति पाउनुभएको क्षणमा तपाईं यस उदेकको शरीरको अङ्ग बनाइनुभयो! तपाईं मण्डलीको अङ्ग हुनुभयो। तर तपाईं एउटै मात्र अङ्ग हुनुहुन्न। तपाईं धेरैमध्ये एउटा अङ्ग हुनुहुन्छ!
४) शरीरको हरेक अङ्ग जीवित हुन्छ।
मानव शरीर जिउँदो संरचना हो। शरीरको हरेक कोष जिउँदो हुन्छ। तपाईंमा र पसलमा कपडा लगाएर राखिएको मानवीय आकृतिमा ठूलो भिन्नता छ। त्यो आकृति मान्छेजस्तो देखिन्छ तर उसमा जीवन छैन। तपाईंचाहिँ जिउँदो मानिस—एउटा जिउँदो संरचना हुनुहुन्छ।
ख्रीष्टको शरीर (मण्डली) को सम्बन्धमा पनि यही नै सत्य हो। मण्डली भनेको केवल एउटा संस्था होइन, यो एउटा जीवित संरचना हो। शरीरको हरेक अङ्गमा जीवन हुन्छ, “जससँग _______ हुनुहुन्छ, ऊसित __________ छ” (१ यूहन्ना ५:१२)। शरीरको हरेक अङ्गभित्र पवित्र आत्मा जिइरहनुभएको हुन्छ (रोमी ८:९ र १ कोरिन्थी ६:१९)। आत्मिक तरिकाले भन्नुपर्दा, के तपाईं मरेको हुनुहुन्छ (एफेसी २:१) कि जिउँदो हुनुहुन्छ (१ यूहन्ना ५:१२)? ________________। तपाईंसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? के एउटा विश्वासी जीवित संरचनाको जीवित हिस्सा हो? किन?
५)आदेशहरू दिने शरीरको शिरले गर्दछ
मानव शरीरमा, शरीरका अङ्गहरूलाई निर्देशन दिनेवाला शिर हो। तपाईंको हातले गर्नुपर्ने कार्यको निर्देशन (वा तरङ्ग) दिमागबाट नै नपाएसम्म केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईंको खुट्टाहरूलाई आफैं कुद्न मन लागेर कुनैपनि बेला दगुर्दैन; बरू, के गर्नु पर्ने हो भनी दिमागले उनीहरूलाई निर्देशन नदिएसम्म उनीहरूले पर्खनै पर्छ। शिर (र यसभित्र भएको दिमाग) शरीरका सबै कृयाकलापहरूको केन्द्र हो।
यसको विषयमा अर्को उदाहरण: मानौं तपाईंको हातले लिन नहुने कुरा लियो (चोरी गर्यो) । यस पापको निम्ति तपाईंले आफ्नो हातलाई दोष्याउन सक्नुहुन्न। तपाईंले जे गर्न लगाउनुभयो, तपाईंको हातले त्यही गरेको हो। अथवा मानौं तपाईंको मुखले झूट बोल्यो। यस पापको निम्ति तपाईंले आफ्नो मुख वा ओंठलाई दोष्याउन सक्नुहुन्न। यो तपाईंको ओंठको गल्ती होइन, यो तपाईंको गल्ती हो! ओंठले त आफूलाई जे बोल्न लगाइयो त्यही मात्र बोल्दछ। तपाईंले कसैको नाकमा हिर्काउनुभयो भने, तपाईंले आफ्नो पाखुरालाई दोष्याउन सक्नुहुन्न। तपाईंको पाखुराले तपाईंका आदेशहरू पालन गरेका मात्र हुन्! तपाईंले आफ्नो पाखुरालाई जे गर्न लगाउनुभयो, उसले त्यही गरेको हो। कुनै अपराधीले यसो भनेको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, “न्यायाधिष ज्यू, म दोषी छैन। मैले त्यसलाई गोली हानेको होइन। गोली दबाएको मेरो औंलाले हो। मैले त्यसो गरेको होइन। मेरो औंलालाई झ्यालखाना पठाउनुहुन्छ भने, त्यो तपाईंको निर्णय हो, तर मचाहिँ निर्दोष छु!” त्यो त मूर्खतापूर्ण हुनेछ! शिरले औँलाले जे गर्न अह्राउँदछ, उसले त्यही मात्र गर्दछ ।
ख्रीष्टको शरीरको शिर को हो? मण्डलीको शिर को हो (एफेसी १:२२-२३; कलस्सी १:१८)? _______________________ त्यसैकारण, शरीरका अङ्गहरूले के-के गर्नुपर्ने हो भनी कसले बताउनुपर्छ? __________________________ हामीले हाम्रा आदेशहरू कहाँबाट लिनुपर्ने हो? हाम्रो मालिक को हुनुहुन्छ? कसरी कृयाकलाप गर्ने र कसरी जिउने भनी हामीले बताउने को हुनुहुन्छ? मानव शरीरका अङ्गहरूले जहिले पनि शिरको आदेश पालन गर्दछ। दु:खको कुरा त यो छ, कि ख्रीष्टको शरीरका अङ्गहरूले जहिल्यै पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको आदेशहरू पालन गर्दैनन्। हामीले पालन गर्नुपर्छ र गर्नैपर्छ, तर कहिलेकाहीँ उहाँका आदेशहरू पछ्याउन हामी विफल हुन्छौं। तपाईंलाई उहाँका आदेशहरू कहाँ पाइन्छ जस्तो लाग्छ?
ग. कहीँ पनि पाइँदैन
घ. दैनिक समाचारपत्रमा
६) सबै अङ्गका वरदानहरू वा गतिविधिहरू एउटै हुँदैनन्।
१ कोरिन्थी १२:१५ लाई बिचार गर्नुहोस्। के खुट्टा शरीरको अङ्ग हो? _______ के हात शरीरको अङ्ग हो? _______ के त्यहाँ हातले गर्न सक्ने तर खुट्टाले गर्न नसक्ने केही कुराहरू छन्? के त्यहाँ खुट्टाले गर्न सक्ने तर हातले गर्न नसक्ने केही कुराहरू छन्? तपाईं आफ्ना खुट्टाहरूले छिटो कुद्न सक्नुहुन्छ कि हातहरूले? के तपाईंले आफ्ना दुई खुट्टाहरूले क्रिकेट ब्याट समातेर बललाई हिर्काउन सक्नुहुन्छ? के शरीरलाई ठीक तरिकाले काम गर्न र गतिविधिहरू गर्न खुट्टाहरू र हातहरू दुवैको खाँचो पर्छ?
१ कोरिन्थी १२:१६ लाई बिचार गर्नुहोस्। के कान शरीरको अङ्ग हो? ________ के आँखा शरीरको अङ्ग हो? _________ आँखाले गर्न नसक्ने कुनचाहिँ काम कानले गर्न सक्छ? ____________ कानले गर्ने नसक्ने कुनचाहिँ काम आँखाले गर्न सक्छ? _______________ शरीरलाई आँखाहरू र कानहरू दुवैको खाँचो पर्दछ!
ख्रीष्टको शरीर (मण्डली) को विषयमा पनि यही नै सत्य हो। परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई विभिन्न प्रकारका वरदानहरू र योग्यताहरू दिनुभएको छ। विजयले गर्ने नसक्ने केही कामहरूका निम्ति हर्क योग्य होला र हर्कले गर्न नक्ने केही कामहरूका निम्ति विजय योग्य होला। एउटा विश्वासीले प्रचार गर्न सक्छ होला तर उसले गाउन नसक्ला। अर्को विश्वास गाउन निपुण होला, तर ऊ एउटा वरदान प्राप्त प्रचारक होइन। कानले सुन्न सक्छ तर देख्न सक्दैन र आंखाले देख्न सक्छ तर सुन्न सक्दैन। तपाईंलाई दुवै चाहिन्छ!
रोबर्ट म्याक्खेनले खेतमा केराउ रोप्दै गरेका दुईजना कुष्टरोगीहरूको बारेमा लेखेका थिए। एकजनाको हात थिएन, र अर्कोको खुट्टा थिएन—यी अङ्गहरू रोगले गर्दा नाश भएका थिए। जसको हातहरू थिएन उसले अर्को खुट्टाहरू नभएकोलाई आफ्नोन ढाडमा बोकिरहेको थियो, र आफ्नो साथीको ढाडमा चढेको मानिसले फेरि आफ्नोई हातमा बीजको झोला बोकेको थियो, र केराउको बीज खसालिरहेको थियो, जसलाई अर्कोले आफ्नो खुट्टाले जमिनभित्र गाड्थ्यो; र यसरी तिनीहरूले एकजना व्यक्तिद्वारा हुने कामलाई दुईजना मिलेर गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। यी मानिसहरू मध्ये प्रत्येकले केही निश्चित कामहरू गर्न सक्दैनथिए, तर दुवैजना मिलेर उनीहरूले उक्त काम गर्न सकिरहेका थिए। ख्रीष्टको शरीर पनि त्यस्तै हो। एक्लै हुँदा हामीले गर्न नकस्ने कामहरू त्यहाँ असङ्ख्य छन्, तर हामी मिल्यौं भने हामीले उक्त काम गर्न सक्ने हुनेछौं!
मानव शरीरमा कार्य सम्पादन गर्न र स्वस्थ हुनको निम्ति सबै कुराहरू दिनुहुने परमेश्वर उही परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले ख्रीष्टको शरीरमा कार्य सम्पादन गर्न र स्वस्थ हुन सबै कुराहरू दिनुभएको छ (१ कोरिन्थी १२:६-७,११,१८ हेर्नुहोस्)।
७) शरीरका हरेक अङ्गहरू आवश्यक र महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
१ कोरिन्थी १२:२१ पढ्नुहोस्। के आँखालाई हातको आवश्यकता पर्छ? मानौं आँखाले अति स्वादिष्ट चकलेट देख्यो। के उसलाई हातको खाँचो पर्दछ? आँखा आफैं नै शरीरको एउटा सुन्दर अङ्ग हो, तर आखाँले समात्न, सम्हाल्न, बोक्न वा समातिराख्न सक्दैन। यी कार्यहरू गर्न आँखालाई हातको खाँचो पर्छ। त्यस्तै गरी हातलाई आँखाको खाँचो पर्छ। आँखा महत्त्वपूर्ण छ र हात पनि महत्त्वपूर्ण छ। के तपाईं डुँडो हुन रुचाउनुहुन्छ? के तपाईं दृष्टिविहिन हुन रुचाउनुहुन्छ?
के शिरले हातलाई यसो भन्न सक्छ, “मलाई तिम्रो खाँचो छैन”? (२ कोरिन्थी १२:२१ हेर्नुहोस्) ________ शिरले यसो सोच्ला, “मलाई त्यस गाडीभित्र गएर शहरहरू हुँदो घुम्न मन लागेको छ।” तर खुट्टाबिना शिर कसरी गाडीभित्र जान सक्ला त? सोच्ने सवालमा खुट्टाको काम हुँदैन र हिँड्ने सवालमा शिरको काम हुँदैन। सोच्नलाई शिरको खाँचो पर्छ र हिँड्नलाई खुट्टाको खाँचो पर्छ! के शिर महत्त्वपूर्ण छ? के खुट्टाहरू महत्त्वपूर्ण छन्?
शरीरका प्रत्येक अङ्गहरू महत्त्वपूर्ण छन् र सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। फुटबलको गोलकिपरले बल समातेको कल्पना गर्नुहोस्। बललाई आफूतिर हिर्काएको कानले सुन्छ; आँखले उक्त बल देख्दछ। दिमागले खुट्टाहरूलाई बलतर्फ दगुर्ने आदेश दिन्छ; हातहरू, खुट्टाहरू र शरीर सबै मिलेर बल आइरहेको दिशातर्फ जाँदछन् र अन्त्यमा—गोलकिपर उफ्रन्छ र आफ्ना पन्जाहरूले बललाई समात्दछ! उक्त बल समात्न शरीरका सबै अङ्गहरू महत्त्वपूर्ण र आवश्यक अङ्गहरू थिए। आँखाले हेर्न नमानेको भए, एउटा खुट्टाले कुद्न इन्कार गरेको भए, अथवा हातले आफैंलाई फैलाउन नमानेको भए, उक्त बल समातिने थिएन।
मानव शरीरका अङ्गहरू एक-अर्कासँग अति नै मिलेर काम गर्छन्, एकअर्कालाई सहयोग गर्छन् र उनीहरूलाई एक अर्काको खाँचो पर्छ। मेरो फोक्सोले शरीरभित्र हावा ल्याउँछ। मेरो दिमाग, मांसपेशीहरू र हड्डीहरूले मेरो फोक्सोलाई सहायता गर्छ। मेरो हड्डीहरूलाई चलहल गराउन मलाई सहायता चाहिन्छ। मेरा मांसपेशीहरूले मेरा हड्डीहरूलाई चलहल गर्न सहायता गर्दछन्। मेरो दिमागले विचाहरू गर्छ र मेरा हरेक अङ्गहरूमा सन्देश प्रवाह गर्दछ। मेरो दिमागलाई अक्सिजन चाहिन्छ र यसले अक्सिजन मेरो रगतबाट पाउँछ मेरा हड्डीहरू, मांसपेशीहरू, दिमाग, फोक्सो, मुटु, नशाहरू र पेट सबैले एकअर्कालाई सहायता गर्दछन्। ख्रीष्टको शरीरमा पनि यस्तै हुन खाँचो हुन्छ। विश्वासीहरूलाई एकअर्काको खाँचो पर्छ र विश्वासीहरूलाई एकअर्काको सहायता चाहिन्छ।
कम्प्युटरहरू चलनचल्तीमा आउनुअगाडि, मानिसहरूले टाइपराइटरको प्रयोग गर्दथे। राम्रो टाइएराइटरका सबै अक्षरहरू ठीकसँग काम गर्ने हुनुपर्छ। एकजनाले एकपटक निम्न कुरा लेखे (तिनको टाइपराइटरमा “इ” अक्षरले काम गर्दैन रहेछ):
मेरो टाXपराXटरले एउटा अक्षर बिगार्ने बाहेक सबै कामहरू राम्ररी गर्छ। हाम्रो मण्डली पनि त्यस्तै-त्यस्तै छ! सबै मानिसहरूले राम्ररी काम गरिरहेका छैनन्। तपाXले भन्नु होला, “ठीक छ, म मात्रै एउटै व्यक्ति हुँ। मैले मण्डली बनाउने वा बिगार्ने त होXन नि।” तर, यसले फरक पार्छ, किनभने प्रभावशाली मण्डली हुन प्रत्येक मानिसको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ! के तपाXले मूल सन्देश बुझ्नुभयो?
एकजना सिकर्मीको औजारहरूले एकअर्कासँग वार्ता गरिरहेका रहेछन्। हतौडा दाजुले सभापतित्व गरिरहेको रहेछ, तर अरूले चाहिँ ऊ निकै हल्ला गर्ने खालको भएकोले त्यहाँबाट जान सुझाव दिए। “ठीकै छ,” उसले भन्यो, “म जान्छु, तर भाइ रन्डा पनि यहाँबाट बाहिरिनुपर्छ। उसको काममा कुनै गहिराइ छैन। उसले जहिल्यै पनि सतहमा मात्र काम गर्छ।” भाइ रन्डाले जवाफ दियो, “त्यसो भए, लाइन तान्ने यो रुलर भाइ पनि बाहिरिनुपर्छ। उसले आफू मात्र सहि छु जस्तै गरेर यता-उता नापिरहन्छ।” त्यसपछि रूलर भाइले खाक्सीको बारेमा गनगन गर्दै भन्यो, “ऊ हुनुपर्ने भन्दा पनि बढी खस्रो छ। ऊ निकै घर्षण गर्ने खालको छ र ऊ जहिल्यै पनि गलत ढङ्गले सामानहरूमा घस्रिरहेको हुन्छ।” भाइ खाक्सीचाहिँ करौंती भाइको निकै तिखो र काटिहाल्ने किसिमको गुणबाट निकै हैरान भएको रहेछ। करौंती भाइले लेवल (सतह बराबर र समतल छ कि छैन भनी जाँच्ने यन्त्र) तर्फ आफ्नो आलोचना लगायो र ऊ जहिल्यै पनि अरूहरूचाहिँ समतल नभएको र नमिलेकोले आरोप लगाउँछ भनी दोष्यायो। ड्रील भाइसँग लेवल भाइको समस्या विशाल थियो, ड्रीलले जहिल्यै पनि अरूहरूको काममा आफ्नो चुच्चो नाक घुसाउँछ भनी उसले आरोप लगायो। अनि तपाईंलाई थाह नहोला, ड्रील भाइचाहिँ क्ल्याम्प भाइ (फलामे अङ्कुश) सँग निकै रुष्ठ रहेछ किनभने क्ल्याम्प भाइ जहिले पनि कडा देखिन्थ्यो र कहिल्यै पनि खुकुलो देखिँदैनथियो।
उनीहरूको तीतो वादविवादको बीचमा, नासरतको सिकर्मी आउनुभयो। उहाँले सबै औजारहरूसँग अनुशासनप्रियतापूर्वक कुरा गर्नुभयो, उनीहरूलाई हप्काउनुभयो, र उनीहरूलाई शान्त रहन आदेश दिनुभयो। उहाँले उनीहरू प्रत्येकको उद्देश्य रहेको र त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने हेतुले उनीहरूको भिन्न बनावट रहेको कुरा बताउनुभयो। उहाँले उनीहरूमध्ये सबैजना महत्त्वपूर्ण छन् र उनीहरूका आफ्नै विशेष जिम्मेवारी छ भनी बताउनुभयो। सिकर्मीले आफ्नो काम गर्न उनीहरू सबैको खाँचो रहेको कुरा उनीहरूलाई बताउनुभयो। त्यसपछि उहाँ सुसमाचार प्रचार गर्ने पुलपिट बनाउन आफ्नो टेबलमा जानुभयो। उहाँले हतौडा, रन्डा, रुलर, खाक्सी, करौंती, लेवल, ड्रील र क्ल्याम्पको प्रयोग गर्नुभयो। प्रयोगमा नआएको र नचलाइएको औजार एउटै पनि थिएन। पुलपिटको काम सिद्धिएपछि रुलर भाइ उठेर भन्यो, “अब मैले देखेँ, हामी सबैजना परमेश्वरसित उहाँका कामदारहरू रहेछौं।”
मण्डलीका सदस्यहरू, अर्थात् ख्रीष्टको शरीरमा भएका विश्वासीहरूको सवालमा पनि यही नै साँचो हो। परमेश्वरले हामीमध्ये प्रत्येकलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। मण्डलीको हरेक सदस्यको खाँचो पर्छ र मण्डलीको हरेक सदस्य नै महत्त्वपूर्ण छन्। हामीहरू मध्ये हरेकमा कमजोरीहरू छन्, हाम्रो चरित्रहरू त्रुटिपूर्ण छन् र हाम्रा पापहरू छन्। कहिलेकाहीँ पवित्र जनहरूका व्यवहारहरू गलत हुन सक्लान्, तर हामीले प्रेममा एकअर्कालाई सहनुपर्छ भनी एफेसी ४:२ ले हामीलाई बताउँछ। एफेसी ४:३२ हेर्नुहोस्। यदि हामीहरू आत्माले भरियौं र आफैंलाई परमेश्वरको अधिनतामा सुम्पियौं भने, हामीले एकअर्कालाई बढाउन र बाहिरकाहरूको सामु एउटा चम्किलो गवाही हुन सकौं भनेर हामीहरू मध्ये हरेकलाई आफ्नो इच्छा अनुसार प्रयोग गर्न प्रभु येशू योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सिकर्मीका औजारहरूले हामीलाई सम्झना गराएका होऊन्।
यदि तपाईंले मुक्ति पाउनुभएको छ भने, ख्रीष्टको शरीरमा तपाईंको अति महत्त्वपूर्ण स्थान छ र मण्डलीलाई तपाईंको खाँचो छ! हतौडा बिना सिकर्मीले आफ्नो काम गर्न सक्दैन। तपाईं बिना मण्डलीले आफ्नो महत्त्वपूर्ण र आवश्यक सदस्यहरूमध्ये एउटालाई गुमाइरहेको हुनेछ।
हामीले यो पनि सम्झनामा राख्नुपर्छ, शरीरका केही अङ्गहरू त्यस्तो विशिष्ट, दृश्यमान र त्यति “सुन्दर” नभए तापनि अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। शरीरमा सजिलै देखिने अङ्ग भनेको आँखा हो। आँखातर्फ सजिलै ध्यानाकर्षण हुन्छ। आँखाहरू प्राय: सुन्दर नै हुन्छन् (निला आँखाहरू, खैरा आँखाहरू इत्यादि)। शरीरका अन्य केही अङ्गहरू त्यति दृश्यमान हुँदैनन् र खासै “सुन्दर” हुँदैनन्। उदाहरणको निम्ति कलेजोले सुन्दर प्रतियोगिता जित्न सक्दैन। फोक्सोहरूलाई अपरेशन नै नगरेसम्म देखिँदैन, र फोक्सोहरू शरीरका अति सुन्दर अङ्गहरू होइनन्। मुटु, फोक्सोहरू, कलेजो, किड्नीहरू इत्यादि—यी सबै अङ्गहरू दृश्यमान र सुन्दर नभए तापनि ती अति नै महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्।
मण्डलीमा केही सदस्यहरू निकै दृश्यमान र निकै विशिष्ट हुन्छन्। पास्टरलाई सबैले देख्छन् किनभने उनी जहिल्यै पनि पुलपीट पछाडि उभिएका हुन्छन्। भजन गाउने समूह (कोयर) वा बाजा बजाउनेहरू पनि निकै दृश्यमान हुन्छन्। त्यहाँ केही सदस्यहरू हुन्छन् जोहरू कमै मात्र दृश्यमान भए तापनि अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यहाँ एउटी बुढी स्त्री हुन सक्छिन् जसलाई धेरै मानिसहरूले देखेका हुँदैनन्, तर तिनले दिनहुँ विश्वासयोग्यतापूर्वक प्रार्थना गर्छिन्। पास्टरले प्रचार गर्न सक्नुको एउटा कारणचाहिँ यस्तै विश्वासयोग्य स्त्रीहरूले आफ्ना घुँडाहरू टेकेर उनको निम्ति प्रार्थना गर्दै, सहयोग गर्दै उनलाई सहायता गर्नाले हो। मानिसहरूले अरूहरूलाई देखेको जस्तै तपाईंलाई नदेख्लान्, तर यसको मतलब तपाईं महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ होइन। १ कोरिन्थी १२:२२-२४ हेर्नुहोस्।
८) सम्पूर्ण शरीरलाई एउटा अङ्ग (चाहे स्वस्थ चाहे बिमार) ले असर पार्दछ।
यदि एउटा अङ्गले दु:ख भोग्यो भने, ऊसँग अरू कसले दु:ख भोग्छ (१ कोरिन्थी १२:२६)? __________________________________________________ तपाईंको बुढी औंलामा हतौडाले लाग्यो भने, के तपाईंको सम्पूर्श शरीरलाई असल पर्छ? तपाईंको शरीरको अन्य अङ्गहरूले कस्तो प्रतिकृया देला (उदाहरणको निम्ति, मुखले यसो भन्ला, “ऐया!” )? तपाईंको नाकमा रूघा लाग्यो भने वा तपाईंको घाटी दुख्यो भने, के तपाईंको सारा शरीरले दु:ख महसुस गर्दैन र?
ख्रीष्टको शरीरको बारेमा पनि यही नै सत्य हो। यदि एउटा अङ्ग आत्मिक रूपमा रोगी छ भने, सम्पूर्ण शरीरलाई नै असर पर्छ! यदि विद्यालयमा वा काममा एउटा अङ्ग राम्रो गवाही भइरहेको छैन भने, यसले सम्पूर्ण मण्डलीको साक्षीलाई नै असर गर्नेछ। यसको ठीक उल्टो पनि सत्य छ। यदि ख्रीष्टको शरीरको एउटा अङ्ग आत्मिक रूपमा स्वस्थ छ र राम्रो गर्दैछ भने, यसले सम्पूर्ण शरीरलाई नै सहायता गर्नेछ।
फुटबल टिमको बारेमा बिचार गर्नुहोस्। यदि टिमको एउटा सदस्यले खराब बोलीहरू बोल्छ, रेफ्रीसँग विवाद गर्छ र नराम्रो खेल प्रदर्शन गर्छ भने, यसले सम्पूर्ण टिमलाई नै खराब देखिने तुल्याउँछ। अर्को तर्फ, यदि एउटा खेलाडीले राम्रो खेल प्रदर्शन गर्छ र रेफ्रीसँग (रेफ्रीकै गल्ती भए तापनि) विवाद गर्न इन्कार गर्छ भने, यो नमूनाले सम्पूर्ण टिमलाई नै सहायता गर्नेछ। ख्रीष्टको शरीरको अङ्गहरू भएकोले हामीहरू सबैजना एउटै टिम हौं। हामीले के गर्छौं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने यसले सम्पूर्ण शरीरलाई नै असर गर्दछ!
९) शरीरलाई पुगेको चोट शिरले अनुभव गर्छ।
कसैले तपाईंको खुट्टा कुल्चियो भने शिरले तुरुन्तै थाह पाउँछ! तपाईंको खुट्टाबाट तपाईंको शिरमा सन्देश पुर्याइन्छ। शरीरको कुनै पनि अङ्गमा चोट पुग्दा, त्यो सन्देश जहिले पनि दिमागमा पुर्याइन्छ र हरेक पटक शिरले त्यो थाह पाउँछ!
जब विश्वासीलाई चोट पुग्छ, प्रभु येशूलाई जहिले पनि त्यसको ज्ञान हुन्छ। उहाँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। जब तपाईंले शरीरलाई छुनुहुन्छ, शिरले महसुस गर्दछ!
प्रेरित ८:१ र ९:१ मा शाउलले ख्रीष्टियनहरूलाई सताइरहेको र दु:ख दिरहेको पढ्दछौं। प्रेरित ९:४ मा येशूले शाउललाई भेट्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, “शाउल, शाउल, तिमी ___________ किन सताउँछौ?” शाउलले ख्रीष्टियनहरूलाई सताइरहेका थिए तर येशूले भन्नुभयो, “तिमी मलाई किन सताउँछौ?” (प्रेरित ९:५ पनि हेर्नुहोस्)। शरीर (ख्रीष्टियनहरू) लाई चोट पुर्याउँदा शिर (ख्रीष्ट) लाई चोट पुर्याइरहेको हुन्छ भनी येशूले शाउललाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो।
हामी जस्तोसुकै समस्याहरू वा कठिनाइहरूबाट भएर गए तापनि येशूलाई ती सबको बारेमा ज्ञान हुन्छ। मानिसहरूले हाम्रो ठट्टा गर्दा वा हाम्रो विरोधमा बोल्दा वा अन्य तरिकाले हामीलाई चोट पुर्याउँदा प्रभु येशूले त्यस कुराको महसुस गर्नुहुन्छ! स्वर्गीय शिरसँग शरीरका अङ्गहरूको सुन्दर सम्बन्ध हुन्छ। हामी विशेष किसिमले उहाँसँग जोरिएका छौं!
१०) शरीर स्वस्थ रहनैपर्छ
मानव शरीर स्वस्थ रहनैपर्छ। यही कारणले हामीले हाम्रो शरीरको वास्ता गर्छौं, पर्याप्त विश्राम लिन्छौं, ठीक प्रकारका खानाहरू खान्छौं। ख्रीष्टको शरीर स्वस्थ रहनैपर्छ। एक-एक अङ्गहरू जति स्वस्थ रहन्छन् ख्रीष्टको शरीर पनि उति नै स्वस्थ रहन्छ।
शरीरको अङ्ग भएकोले, अरू अङ्ग बिमार हुँदैमा म आफैंचाहिँ बिमार हुनुपर्दैन। अरू विश्वासीहरू आत्मिक रूपमा रोगी भए तापनि, परमेश्वरले मलाई स्वस्थ रहन सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। आत्मिक रूपमा स्वस्थ रहनबाट रोक्न सक्ने एउटै मात्र व्यक्ति भनेको म आफैं नै हुँ। म आत्मिक रूपमा स्वस्थ छैन भन्दैमा मैले ख्रीष्टको शरीरका अन्य अङ्गहरूलाई दोष लगाउन मिल्दैन। मैले केवल आफैंलाई मात्र दोष लगाउन मिल्छ।
यदि थुप्रै अङ्गहरू रोगी छन् भने शरीरले खासै राम्रो गर्न सक्दैन। कसरी एउटा मानिस स्वस्थ विश्वासी हुन सक्छ? स्वस्थ विश्वासी हुन मानिसले के गर्नुपर्छ? स्वस्थ विश्वासीलाई तपाईं कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ? स्वस्थ विश्वासी स्कूलमा कस्तो हुन्छ? मण्डलीमा कस्तो हुन्छ? तपाईं कत्तिको स्वस्थ हुनुहुन्छ? यदि अन्य विश्वासीहरू तपाईं जत्तिकै स्वस्थ भएको भए, के ख्रीष्टको शरीरले राम्रो प्रगति गर्नेथियो होला?
परमेश्वरले मलाई सुन्दर भौतिक शरीर दिनुभएको छ। परमेश्वरले मलाई ख्रीष्टको शरीरको एउटा हिस्सा हुने विशेषाधिकार पनि दिनुभएको छ (यदि मैले मुक्ति पाएको छु भने)। के म मेरो भौतिक शरीरको निम्ति धन्यवादी छु? के म विश्वासीहरूको शरीरको निम्ति धन्यवादी छु? के म मण्डलीको शिरको निम्ति धन्यवादी छु? के म उहाँका आज्ञाहरूलाई पछ्याइरहेको छु?
« ११ आत्माले भरिनुका परिणामहरू के के हुन्?
ख्रीष्टको शरीरमा अस्थायी आत्मिक वरदानहरू »